Shina PP Melt tsofina vita amin'ny milina fanamboarana lamba tsy madinidinika ho an'ny orinasa vita amin'ny Medical Mask Nonwoven Fabric ICT
Drone tsy niasa tamin'ny fakantsary
PP Melt tsofina vita amin'ny fanamboarana lamba tsy madinidinika ho an'ny lamba vita amin'ny masika tsy miasa
Fifanekena azo ampiharina:
Fanohanana ara-teknika, Fanohanana an-tserasera, ampahany amin'ny Spare
Toerana serivisy eo an-toerana:
Grika mandeha ho azy
Tolotra nomen'ny varotra:
Fitaovana maimaimpoana, Fanohanana ara-teknika, Fanohanana an-tserasera
Masinina vita amin'ny lamba tsy marika PP Spunbond
PP Spunbond Nonwoven lamba
Lamba lamba tsy roa
Fampiharana ny vokatra
Melt Blown filtration Material, Fialam-bolo ho an'ny sarimihetsika filokana
Sobika PP (fitaovana manokana hitsofosirana)
Naroso 1500g / min
1-1.5 taonina / 24 ora, raha miova ny lanjan'ny grama vokatra, dia miova arakaraka ny lanjan'ny tsangana
Isan-karazany lanja grama vokatra
Max. hafainganam-pandeha mekanika
Tianao ny fahatsorana
Tokony ho 560KW
Ny fitaovana dia mampiasa fitaovana vita amin'ny menaka polypropylene ho menaka no tena fitaovana fototra, miampy ireo additives toy ny electrostatic auxiliary masterbatch sy masterbatch miloko, hamokatra lamba tsy miova polypropylene miaraka amin'ny loko samy hafa, ny fananana samihafa ary mety amin'ny fampiasana samihafa.
1. Fizarana fanatanjahantena sy famelomana arak'asa
5. Mampihena ny savony 1
6. Fivoriambe 1
7. Rindran'ny rivotra mafana 1
8.Ny hafanana 1
9.Efa-mangotraka / Fanamorana mpankafy fanolo 1
10.Mampifandray amin'ny rano-drivotra 1
11. Mpanamboatra mpamorona milina 1
14.Etectric control System 1
15.Hifofofofoina maty ny lohan'ny fanadiovana 1
16.Mizarana ampahany N
* Serivisy mialoha ny varotra
1 .Ny fanontaniany sy ny fanohanana mpanoro hevitra, ny sarisary saron-tava matihanina na Tsipika vita amin'ny lamba mifangaro vahaolana maimaimpoana
2. horonan-tsarimihetsika milay ho anao.
3.Sampeo fitsapana fanandramana.
4. Jereo ny Fanamboantsika.* Serivisy aorian'ny famarotana
1. Ireo boky / lahatsary amin'ny fametrahana milina, ny fanitsiana, ny fametrahana, ny fikojakojana dia misy anao.
2. Raha misy olana mitranga ary tsy ahitanao ireo vahaolana, ny Telecom na ny serasera amin'ny Internet dia hifanatrika fifandraisana afaka misy 24 ora.
3. Teknolojia sy teknisiana teknolojia dia misy mandefa any amin'ireo firenenao raha toa ka manaiky handoa ny fandaniana ianao.
4. Manana milina 1 taona ho an'ny milina ny milina, garantiana 2 taona ho an'ny ampahany amin'ny herinaratra. Mandritra ny taom-piantohana raha misy tapany tsy notapahin'olombelona. Homena maimaimpoana izahay hanoloana ny vaovao ho anao. Hanomboka ny fiantohana aorian'ny fandefasana ny masinina azontsika ny B / L.FAQ
1: Ahoana no fomba hahitana milina mety amin'ny vokatrao?
Lazao ahy ny antsipiriany momba ny vokatrao. 1. Inona no karazana vokatra anananao. 2. Ny haben'ny vokatrao (ny halavany, ny sakany ary ny haavony).
2: Mahazo injeniera ve ny injeniera iray?
Eny, fa ny saran-dàlana dia mandoa anao ，Naato vetivety io serivisy io .Ao tokoa ny hamonjy ny vidinao dia handefa anao lahatsary feno ny fametrahana milina feno antsipirihany ary hanampy anao hatramin'ny farany.
3. Orinasa na orinasa mpivarotra ve ianao?
Izahay dia orinasa, ary indrindra ny R&D, manamboatra sy mivarotra fitaovana mandeha ho azy. Efa 10 taona mahery izao no niarahanay tamin'ny famokarana milina mandeha ho azy.
4. Ahoana ny fomba fandoavanao?
T / T amin'ny alàlan'ny kaontintsika banky mivantana, na avy amin'ny serivisy antoka momba ny varotra any Alibaba, na avy amin'ny West Union, na vola.
5. Ahoana no ahafahantsika mahazo antoka ny momba ny kalitao milina aorian'ny fametrahantsika ny baiko?
Alohan'ny fanaterana dia halefanay aminao ny sary sy ny horonan-tsarinao mba hanamarinana ny kalitao, ary azonao atao koa ny mandamina kalitao ianao
mandinika irery na amin'ny fifandraisanao any Shina.
6. Matahotra izahay fa tsy halefanay ilay milina aorianay handefasanao ny vola? Aza adino ny fahazoan-dàlana sy ny fanamarinanay etsy ambony. Ary raha tsy matoky anay ianao dia afaka mampiasa serivisy fiantohana ara-barotra Alibaba, hiantoka ny volanao ary hiantoka ny serivisy amin'ny fotoana sy ny kalinanao.
7. Nahoana isika no tokony hifidy ny orinasanao?
Matihanina amin'ny milina mandeha ho azy mandritra ny 10 taona mahery izahay, ary manolotra serivisy aorian'ny varotra. Tsy omena antoka ianao fa tsy misy atahorana amin'ny raharahantsika.
Ny tolotra tolotra aorian'ny varotra
1. Alefaso ny teknisianina mametraka sy hanafoana ny fampitaovana.
2. Ny antoko dia namboarina namboarina ny serivisy fanampiana araka ny sary an-tsoratry ny fametrahana fototra, manomana ny fametrahana mialoha ny fitaovana ary miara-miasa am-pahavitrihana amin'ny asan'ny mpiasan'ny orinasa. Ny fantsona rano, herinaratra ary ny entona dia apetraka amin'ny toerana voatondro araka ny takian'ny sary fametrahana, ary efa voaomana avokoa ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny famokarana.
Previous: 1600mm Meltblown Nonwoven lamba vita amin'ny lamba
Manaraka: Teknolojia ICT dia vonona handefa lozisialy lozisialy 3ply earloop kiririoka mofomamy mofomamy
Fivarotana mangatsiaka antsokosoko tsy mahomby ...
PP Melt-tsofina Nonwoven Fabric Production f ...
1600mm Meltblown Nonwoven lamba vita amin'ny lamba
Masinina PP Meltblown / Fanaterana haingana tsy roa k ... F